यो पटक लामो समयको अन्तरालपछि चितवनमा सिकारीले गैंडा मारे । दुर्लभ वन्यजन्तु गैंडा मार्नु भनेको ठुलो अपराध हो । विस २०६९ सालको फागुन ५ गतेयता यस्तो अपराध भएको थिएन । गएको बैशाख १९ गते मध्यरातमा तस्करहरुले गोली हानेर गैंडा मारे । गैंडाको नाक माथि हुने सिंग जस्तो अंग खागका लागि तस्करहरुले गैंडा मार्छन् । यस पटक पनि खाग निकालेर छाडेको गैंडाको मृत शरिर निकुञ्जका अधिकारीहरुले घटनाको भोलि पल्ट मात्रै भेटाए । जब कि गैंडा मार्न गोली चलेको आवाज निकुञ्जमा तैनाथ सुरक्षा पोष्टमै सुनिएको थियो । चोरी सिकार विरुद्ध निकुञ्ज निकै आक्रमक रुपमा लागेको समय हो । यस्तो बेलामा पनि तस्करहरु सजिलै उम्के ।
त्यसो त निकुञ्जमा तैनाथ सेनाको पुरानो गण हालै परिवर्तन भएको छ । त्यसैले नयाँ सुरक्षाकर्मीले मेसो पाउन सकेनन् कि भनेर पनि सोच्न सकिन्छ । तर गैंडा मारेपछि खाग लिएर तस्कहरु डाँडा कटेको घटना यो मात्रै होइन । प्रायस सिकारीहरुले गैंडा मारेर खाग उम्काएपछि सजिलै समातिन नसक्ने घटनाहरु अनेक छन् । गैंडा मारेपछि सुरक्षाकर्मीको सक्रियताका कारण खाग लैजान नपाएका घटना नभएका होइनन् तर त्यस्तो विरलै हुने गरेका छन् ।
निकुञ्जले गैंडा मार्न ठिक्क परेकाहरुलाई बन्दुक र पासोसहित समाएका घटनाहरु बरु प्रशस्तै छन् । तर घटना भएपछि तत्काल अपराधीहरु किन समातिदैनन् ? यो चाही सोचनीय विषय बनेको छ । घटना भएको एक वर्ष, दुइृ वर्ष, चार वर्ष र १० वर्षपछि पनि मान्छे समातिने गरेका छन् । लगातार नौ, १० वटा गैंडा मारेर खाग उम्काएको अपारधी समाउन पनि निकुञ्जलाई दशक नै लाग्ने गरेको देखिएको छ । गैंडा मारेपछि तत्काल खागसहित कतिलाई समाउनु भएको छ भनेर सोध्ने हो भने अधिकारीहरुलाई नाजवाफ हुन गर्छन् ।
अपराधीहरुलाई पछ्याउन निकुञ्जले आधुनिक विधिहरुको पनि प्रयोग नगरेको होइन । तालिम प्राप्त कुकुरहरुको पनि उपयोग हुन थालेको छ । तर खाग लिएर कुदेका अपराधीहरुलाई समाउन अझै सफल्ता मिलेको छैन । निकुञ्जले यो पटक पनि तालिम प्राप्त कुकुर ल्यायो तर नतिजा उही खाली हात मात्रै भयो । गैंडा, बाघ जस्ता दुर्लभ वन्यजन्तु जोगाउन राज्यले ठुलो लगानी गरेको छ । चितवन निकुञ्जमा मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि एउटा गण र एउटा अर्को गुल्मका गरेर झण्डै ११ सय सुरक्षाकर्मी गैंडा र बाघका लागि भनेर तैनाथ छन् । निकुञ्ज प्रशासनको पनि आफ्नो सुरक्षा र सुराकी संयन्त्र छ । हामी सर्वसाधरणले सुन्दा लाग्छ निकुञ्ज सुरक्षाको मजबुद किल्लाभित्र रहेको छ ।
तर यो अभेद्य किल्लभित्र पनि चोरी सिकारी र तस्करहरु र्निे गर्छन् । अनि आफ्नो काम सकेर सजिलै बाहिर पनि आउँछन् र आफ्नो सुरक्षित गन्तब्यमा पनि सजिलै पुग्छन् । पहिला निकुञ्ज क्षेत्रबाट उम्केपछि समातिन गाह्रो पनि थियो । किन कि गैंडा मार्नेलाई समाउने भनेको निकुञ्जका मान्छे र त्यहाँ तैनाथ सेनाले मात्रै हो भन्ने जस्तै थियो । पछिल्लो समय प्रहरीले पनि तस्करहरु समाउन सक्रियता देखाएको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुशन्धान ब्युरो (सीआईबी) यो काममा लागेको छ । सीआईबीको सक्रियताले धेरै पुराना पुराना नामुद सिकारी र तस्कहरुहरु गिरफ्तार भए । तर सीआईबीको सक्रियता सुरु भएपछि पनि गैंडा मारेर रगत चुहुदै गरेको खाग बोकेर हिडेका तस्करहरु समातिन सकेका छैनन् ।
निकुञ्जका लागि तैनाथ सुरक्षा संयन्त्रले पहिलो काम गैंडा, बाघ लगायतका दुर्लभ वन्यजन्तुको सिकार नै हुन दिनु भएन । यो काममा धेरै हदसम्म सफल्ता मिल्दै पनि गएको छ । तर घटना एपछि अपराधमा संलग्नहरु तत्काल समातिनु पर्छ । सुरक्षाका दृष्टीले यो प्रमुख सर्त हो । तर निकुञ्जको सुरक्षा संयन्त्र दोस्रो काममा भने असफल नै छ । यस्तो किन हुने गरेको छ ? निकुञ्ज प्रशासनले कहिल्यै विचार विमर्श गरेको छ कि छैन कुन्नी ?
कुनै अपराधीले कसैको हत्या गरेमा हामी अन्य कुरा भन्दा पनि सवैभन्दा पहिले हत्यामा संलग्नहरु गिरफ्तार होउन भन्ने चाहन्छौं । प्रहरीले सवैभन्दा पहिले त्यस्ताको पहिचान गरोस उनीहरुलाई समाओस भन्छौं । अपराधमा संलग्नहरु तत्काल समातिएनन् भने हामी प्रहरी असफल भयो भन्छौं । अपाराधिक घटना हुनै नदिनु सवैभन्दा राम्रो । घटना भएपछि त्यस्मा संलग्नहरु तत्काल समातिनु पनि सुरक्षाकर्मीको सफल्ता मानिन्छ । यही कुरा वन्यजन्तु अपराधमा किन लागु हुँदैन ?
हजारबढी सुरक्षाकर्मी र प्रशासन संयन्त्रलाइृ छक्काएर एकाध मान्छेहरु कसरी सफल भएका होलान ? हामी सर्वसाधरण र संरक्षणकर्मीहरु पनि यसरी घोत्लिने र सम्भावित कारणहरुका पत्रहरु केलाउने तर्फ पनि लागेका छैनौं । न त निकुञ्ज प्रशासनलाई नै कहिल्यै यसरी सोधेका छौं । अपराधीहरु खागका लागि लामो समयसम्म कुरेर पनि बस्दा रहेछन् भन्ने देखिएको छ । विस २०६७ सालयता वर्षमा फाट्ट फुट्ट गैंडा मर्न थालेका छन् । ६७ साल पुस १९, ६८ सालको चैत्र २०, ६९ सालको फागुन ५ पछि ७१ सालको बैशाख १९ मा तस्करहरु गैंडा मार्न सफल भए । पुरै ७० सालमा निकुञ्जका एउटा पनि गैंडा मरेनन् ।
राज्यको सानो प्रयास र लागनीले यो सफल्ता मिलेको होइन । यस्तो सक्रियता बढेका बेलामा पनि एकाध घटना नहुने होइन । तर तत्काल अपराधी समाउन नसक्ने कमजोरीलाई सुधार्न निकुञ्ज प्रशासनको किन ध्यान नगएको हो ? यो पुरानो रोग हो । उपचार नखोजे रोग झनै बल्झेर गम्भीर खालका समस्याहरु ल्याउँछ । वर्षमा एकाध घटना मात्रै गराएर भए पनि तस्करहरु आफ्नो उस्थिती कायमै राख्ने योजनामा रहेको देखिएको छ । घटना गराएपछि समानसहित सजिलै उम्कदा उनीहरुको मनोवल बढेर जान्छ । गैंडा मारेको तत्कालै अपराधीहरु पनि समातिन थालेमा अवस्था अर्कै बनेर आउने छ । गोली चलेको आवाज सुरक्षा पोष्टहरुमा सुनिदा पनि तस्करहरु खाग बोकेर सुरक्षित तरिकाले निस्कन सक्छन् भने यो जस्तो कमजोरी अथवा लापरवाही अरु के हुन सक्छ ?
एकाध घटना भएका भए त्यसलाई कमजोरी पनि भनेर नजरअन्दाज गर्न सकिन्थ्यो होला । तर विगतका थुप्रै घटनामा यस्तै भएको छ । तस्कर गैंडा नजिक पुग्न सक्यो भने गोली हान्छ खाग झिक्छ अनि खाग बोकेर उम्कन पनि सफल हुँदै आएको छ । यो क्रमलाई निकुञ्जले रोक्न सक्नु प¥यो । नभए निकुञ्जले लापरवाही गरेको छ है भन्ने बुझाइ निर्माण हुने छ । राज्यनै सिकार शुन्य बनाउन उच्च तयारीका साथ जुटेपछि उचित मौकाका लागि धैर्य गरेर बसेका तस्करहरु आफ्नो प्रयासमा सफल हुनुको रहस्य के हो ? निकुञ्ज प्रशासनले खोजविन गर्न आवश्यक छ ।
Posted by रमेशकुमार पौडेल at 7:38 PM
ताञ्जिङ निमा लामा
गैंडा मारेको आरोपमा पहिलो पटक समातिदा साधरण तारेखमा छुटेका र पछि मरेको भन्ने कागजी प्रमाण जुटाएर मुद्दा नै बन्द गराउन सफल भएका एक व्यक्ति सोही काण्डमा फेरि समातिदा सजायमाथि साजाय पाउन थालेका छन् । छ महिनाअघि १५ वर्ष जेल सजाय पाएका उनालाई फेरि १३ वर्ष कैद हुने फैसला भएको छ ।
स्थायी ठेगना तिब्बत भए पनि काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ६ बौद्ध फुलवारी बस्दै आएका ७० वर्षीय ताञ्जिङ निमा लामालाई चितवन निकुञ्जले अहिले एकपछि अर्को सजाय सुनाउन थालेको छ । गएको चैत्र २७ गते निकुञ्जले उनलाई गैंडा मारेको अभियोगमा १३ वर्ष कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तोक्यो ।
निमालाई गएको असोज १६ मा पनि चितवन निकुञ्जले १५ वर्ष कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो । वन्यजन्तु अपरधमा हुने यो नै सवैभन्दा ठुलो सजाय हो । ६८ सालको असोज २९ देखि कात्तिक दुई गतेसम्म निकुञ्जले चोरी तस्कर विरुद्ध पक्राउ अभियान चलाएको थियो । निमा त्यही बेला समातिएका हुन् ।
त्योभन्दा आठ वर्षअघि पनि निमालाई निकुञ्जले समाएको थियो । तर त्यो बेला निमा निकै चलाखी पुर्ण तरिकाले मुद्दाबाट उम्केका थिए । निमा विस.२०६० साल बैशाख १९ गते नारायणगढ पोखरा बसपार्कको गुल्मेली होटलबाट हुम्लाका छिरिङ भन्ने दोग्लासहित समातिएका थिए ।
उनीहरुलाई निकुञ्जले जेठ १६ गते पुर्पुक्षका लागि थुनामा पठाइएको थियो । थुनामा राख्ने निकुञ्जको आदेशका विरुद्ध निमा र दोग्लाले पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा निवेदन दिएपछि ६० साल भदौ १० गते उनीहरु धरौटीमा छुटेका थिए ।
‘सो आदेशले गैंडा मुद्दामा धरौटीमा छुटेको निमा विरुद्ध बाघको छालाको केश पनि थियो । जसका कारण फेरि समातेर मुद्दा चलायौं । प्रमाणले नपुगेपछि बाघको छाला केशमा उसलाई हाजिरी जमानिमा छाड्नु प¥यो’ चितवन निकुञ्जका तत्कालिन सहायक संरक्षण अधिकृत र अहिलेका प्रमुख कमलजंग कुँवरले सुनाए ।
गैंडाको खाग बिक्री व्यवसाय गरेको अभियोगमा अदातलबाट धरौटी र बाघको छाला कारोबार गरेको मुद्दामा हाजिरी जमानिमा छुटेका निमाको मृत्यु भएको भन्ने कागज निकुञ्जमा पेश भयो ।
‘इन्डियाको प्रभाइभेट क्लिनिकमा तान्जिङ निमाको मृत्यु भयो भन्ने डाक्टरी रिपोर्ट पेश भयो । तर लाशको फोटो, पोष्टमार्टमा रिपोर्ट र कुन रोगले मरेको हो केही उल्लेख थिएन’ कुँवरले भने ।
‘त्यसपछि मैले यथेष्ट प्रमाण नभएकाले थप प्रमाण पेस गर्न लगाउनु भन्ने तोक लगाए पनि तत्कालिन सुब्बा उत्तम खरेलले मान्छे मरेपछि अपराधको अन्त्य हुन्छ भन्ने लेखेछन् र वार्डेन शिवराज भट्ट सरले मुद्दा फैसला गर्दा सोही बमोजिम गरिदिनु भएछ’ कुँवरले लेखेको चर्चित पुस्तक ‘गैंडालाई चार वर्ष’ मा यस्तो विवरण उल्लेख छ ।
निमा पहिलो पटक समातिदा सहायक वार्डेन रहेका कुवँर दोस्रो पटक समातिदा भने चितवनमा थिएनन् । सो बेला चितवन राष्टिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत झमकबहादुर कार्की थिए ।
निमा विरुद्धको पछिल्ला मुद्दामा दुवै पटक सजाय सुनाउँदा चाही प्रमुख संरक्षण अधिकृतको हैसियतले कुवँरले नै सजाय सुनाएका हुन् । विस २०६८ को असोज २९ देखि कात्तिक २ गतेसम्म १७ जना गिरफ्तार भएका थिए । स्थानीय सिकारीदेखि अन्तराष्टिय बजारमा खाग बेच्न लैजाने गिरोह नै समातिएको निकुञ्जको दावि थियो ।
अन्तराष्टिय बजारमा एउटा खागको मुल्य ३५ लाख रुपैयाँसम्म पर्ने सोही गिरोहको गिरफ्तारीपछि खुलासा भएको थियो । त्यो बेला समातिएका १७ मध्ये ११ जनालाई गएको असोजमा सजाय भएको थियो । सवैभन्दा धेरै सजाय पाउनेमा निमा एक्ला थिए ।
भारतको वाल्मिकी टाइगर रिजर्भमा गैंडा मारेर नेपालमा खागको कारोबार गरेको अर्को मुद्दामा चैत्र २७ गते उनलाई सजाय भएको चितवन निकुञ्जका सुचना अधिकारी टीकाराम पौडेलले बिहीबार निकालेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । यो मुद्दामा निमासहित थप अर्को तिब्बती र दुईजना नेपालीलाई पनि सजाय भएको छ ।
गैंडा मारेर खाग बिक्री गर्ने काममा संलग्न भएको पुष्टि भए ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँ जरिवाना या पाँचदेखि १५ वर्षसम्म कैद अथवा कैद र जरिवाना दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
Posted by रमेशकुमार पौडेल at 8:51 PM
बैशाख २६ मा गीतानगरमा एकै दिन दुईजनाको ज्यान लिएको पाटे बाघ
बाघ मार्न प्रयोग हुने पासोसहित समातिएका एक व्यक्ति
Posted by रमेशकुमार पौडेल at 6:30 PM
गोरखा ल्याण्डको बारेमा छ वर्ष पुरानो लेख
यो लेख सन् २००७ को डिसेम्बरमा लेखिएको हो । जुन बेला सन् २०१० सम्म गोरखाल्याण ल्याएरै छाड्ने उद्घोषका साथ विमल गुरुङले आन्दोलन सुरु गरेका थिए । सन् २०१० पनि आयो गयो तर गोरखाल्याण्ड बन्न सकेन । अहिले गोरखाल्याण्ड अभियान चर्केको छ । त्यसैले यो पुरानो लेख खोजेको हुँ ।
भारतमा गोरखाल्याण्ड राज्यको माग गर्दे दार्जालिङका गोरखाली नेता सुवास घिसिङको नेतृत्वमा सन् १९८६ मा हिसांत्मक आन्दोलन चर्कियो । सन् १९८८ मा सिमित अधिकार सहितको दार्जालिङ गोरखा पार्वत्य परिषद (दागोपाप) पाएर घिसिङले सम्झौता गरे पछि सो आन्दोलन रोकियो । तर गोरखाल्याण्ड बनाउने चर्चा बेला बेलामा उठी रहन्छ । अहिले पनि दार्जालिङका भित्ताहरुमा गोरखाल्यण्डको माग लेखिएका पोष्टरहरु छ्याप्छ्प्ती टा“सीएका छन् ।
दागोपापलाई छैठौं अनुसूचीको मान्यता दिने भारतको केन्द्र सरकारको योजना सार्वजनिक भए पछि दार्जालिङमा गोरखाल्याण्डको आन्दोलनले फेरि आकार लिन थालेको हो । तर छैठौं अनुसूचीको विपक्षमा मात्र होईन समर्थनमा पनि गोरखाली नेताहरु देखिएका छन् । घिसिङ नै छैठौं अनुसूचिको समर्थक हुन् । गोरखा लिग,गोरखा राष्ट्रिय का“ग्रेस र गोरखा जनमुक्ति मोर्चाले पश्चिम बंगाल सरकारको सशक्त विरोध गर्दै दार्जालिङ तताएका छन् । विमल गुरुङ अध्यक्ष रहेको गोरखा जनमुक्ति मोर्चा आक्रमक ढंगले अगाडी आएको छ ।
गोरखा जनमुक्ति मोर्चाले कात्तिक २१ गते अर्थात सात नोभेम्वर वुधवारका दिन दार्जालिङको चौरास्तामा सभा राखेर गोरखाल्याण्ड राज्य बनाएरै छाड्ने आन्दोलन सुरु भएको घोषणा ग¥यो । छैठौं अनुसूचीको विरोधमा १५ नोभेम्वर अर्थात कात्तिक २९ गते दार्जालिङमा सभाहरु सम्पन्न भए । त्यसको हप्ता दिन पछि २२ नोभेम्वरमा मोर्चा र गोरखा लिगले पहाड बन्द अयोजना ग¥यो । छैठौं अनुसूची समर्थकहरु पनि चुपचाप रहेनन् । मोर्चा र लिगको बन्द पछि दार्जालिङमा फेरि बन्द भयो ।
घिसिङको संगठन गोरखा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका समर्थकहरुले २४ नोभेम्वरमा अनिश्चित बन्द राखेका थिए । जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरुङलाई पक्रनु पर्ने मागले त्यो बन्द भएको थियो । पूर्व पार्षद केवी गुरुङ माथी विमलका समर्थकले आक्रमण गरेको अरोप लगाउ“दै यस्तो माग आयो । अनिश्चित भने पनि चार दिन पछि बन्द फिर्ता भयो । तर छैठौं अनुसूची समर्थक र विरोधी गोरखालीहरुको मत मतान्तर झडपकै तहमा पुग्नुले गोरखाल्याण्ड आन्दोलनलाई कम्जोर बनाउने पिरलो दार्जालिङका सर्वसाधरणलाई छ ।
गोरखाल्याण्ड नै हराउने चिन्ताः घिसिङले सन् ८८ मा गोरखाल्याण्डको बदला दागोपापमा चित्त बुझाएर आन्दोलन रोके । त्यस पछि गोरखाल्याण्ड प्राप्तीको अभियान यति कम्जोर बन्यो की सन् २००० मा भारतमा तीनवटा नया“ राज्यको जन्म हुदा गोरखालीहरुको हातमा केही परेन । अहिले आएर दागोपापले छैठौं अनुसूचीको मान्यता पाए गोरखाल्यण्ड सधैको लागि गुम्छ भन्ने चिन्ताले एक थरी गोरखालीहरु आन्दोलित भएका हुन् ।
दार्जालिङ भारतको पश्चिम बंगाल राज्य अन्तर्गत पर्ने नेपाली भाषीको बाहुल्यता भएको पहाडी जिल्ला हो । यो ठाउ“ सन् १८१६ को सुगौली सन्धि पछि नेपालको हातबाट फुत्केको भूभाग हो । दर्जालिङले सन् १९०७ बाटै पश्चिमबंगालबाट मुक्त हुन चाहेको हो । बंगालको उत्तरी भूभाग दार्जालिङ र डुवर्सलाई छुट्टाएर अलग राज्य दिनु पर्ने माग उठेको सय वर्ष भयो तर पहाडवासीले राज्य होईन नया“ नया“ नेता देख्न र उनीहरुको मत मतान्तर सुन्न मात्र पाएका छन् ।
सुवास घिसिङले सन् १९८० मा गोरखा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा गठन गरेका हुन् । सन् १९८६ को जुलाई २२ मा पहिलो दिन मै १३ जना आन्दोलनकारीको ज्यान जाने गरि घिसिङले हिंसात्मक आन्दोलनको सुरुवात गरे । गोरखाल्याण्ड नपाएसम्म निरञ्तर आन्दोलन गर्ने पूर्व घोषणा भए पनि घिसिङले सन् १९८८ को अगष्ट २२ मा केन्द्र र बंगाल सरकारस“ग सम्झौता गरे । त्यो बेलामा १२ सय जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
अलग राज्यलाई थाति राखेर दार्जालिङले पाएको गोरखा पार्वत्य परिषदमा दार्जालिङ, खर्साङ र कालिम्पोङ सव डिभिजन समेटिएका छन् । दागोपापले बंगाल राज्य सरकार अन्तर्गत रहेर सातवटा विभागहरु हेर्न पाउ“छ । यो परिषद ४२ सदस्यीय हुन्छ । तर २८ सिटका लागि मात्र निर्वाचन हुन्छ अरु मान्छे राज्य सरकारले छान्छ । त्यसैले यो राज्य सरकार अन्तर्गत रहेको एउटा साह्रै शक्तिहिन संस्था भएको असन्तुष्ट गोरखालीहरु आरोप लगाउ“छन् ।
परिषदमा घिसिङकै एक छत्र राज छ । विगत तीन वर्षदेखि परिषदको चुनाव पनि भएको छैन । घिसिङले कार्यबहाक भएर काम गर्दै आएका छन् । परिषदमा विकास बजेटको रुपमा सन् ८८ देखि २००० सम्म सात सय २१ करोड भारतीय रपैया“ आएको थियो तर लेखा परिक्षण भएको थिएन । यो रकममा भ्रष्टाचार हुने चर्चालाई बल पुग्ने गरेर साहित्यकार ईन्द्रबहादुर राईले भनेका थिए ‘दागोपापमा करोडौं रकम अयो भन्ने सुनिन्छ तर काम भने केही भएको छैन ।’
यही परिषदलाई छैठौं अनुसूचीको मान्यता केन्द्र सरकारले दिन थालेको हो । यो सम्बन्धि विधेयकले नोभेम्बर २९ मा भारतीय लोकसभामा प्रवेश पाएको छ । विधेयक पेश हुदा घिसिङको समुह गोरखा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका दार्जालिङ शाखा अध्यक्ष दीपक गुरुङले हर्ष ब्यक्त गर्दै विधेयक पारित हु“दाको दिन पहाड भरी धुमधामस“ग खुसी मनाउने तयारी भैरहेको बताए । अखिल भारत गोरखा लीगका मदन तमाङले भने यो कुरा पहाडको निम्ति दुर्गाग्यपूर्ण भएको बताए । छैठौं अनुसूचीलाई समर्थन गर्नु बंगालको दासत्वको समर्थन गर्नु हो भन्ने नारा गोरखा लीगको छ । क्रान्तिकारी माक्र्सवादीहरुको कम्युनिष्ट पार्टी (क्रामाकपा) ले विधेयकले भारतीय गोरखाको कदर नगरेको प्रतिकृया दिएको छ ।
भारतीय संविधानमा व्यवस्था भएको छैठौं अनुसूची अनुशार कुनै क्षेत्र वा जिल्लामा विभिन्न आदिवासी समूह बस्छन् भने उनीहरुलाई स्वायत्तता दिने व्ययस्था छ । ‘यसले पहाड र मधेसको स्थायी सिमाना खडा गरिदिन्छ अनि सिलगडी र डुवर्स सधैंका लागि बंगालको कब्जामा पर्न जान्छ । यस काममा बंगाल सरकार र घिसिङ सफल भए गोरखाल्याण्डको मलामी जादा हुन्छ । परिषदका अहिलेका तीनवटा मुकामबाट मात्र राज्य बन्न सक्दैन । सवै भन्दा सानो मानिएका राज्य पनि यी भन्दा कम्तीमा तीन गुणा ठूला छन् ।’ सिलगडीबाट निस्कने नेपाली दैनिक सुनचरीमा डा.हर्कबहादुर क्षेत्रीले यस्तो लेखेका छन् ।
छैठौं अनुसूचीले गोरखाल्याण्ड ल्याउ“छ भन्दै घिसिङ नहिडेका होईनन् । तर सुनचरी मै कृष्णराज क्षेत्री लेख्छन् ‘दार्जालिङ गोरखा पार्वत्य परिषदलाई छैठौं अनुसूची मार्फत संविधानमा अन्तर्भुक्त गराए पछि यो बंगालको भू भाग हुन्छ अलग राज्य गोरखाल्याण्ड हुदैन भनेर मुख्यमन्त्री बुद्धदेव भट्टचार्यले भनेका छन् उनको उक्त बक्तव्यले गोरामुमो (घिसिङको संगठन) लाई लाज शरम आउनु पर्ने हो ।’ दार्जिलिङ्, खरसाङ, कालेबुङ, डुवर्स र सिलिगुडीलाई नसमेटे गोरखाल्याण्ड बन्न सक्दैन छैठौं अनुसूचिले डुबर्स र सिलिगुडीलाई अलग पार्छ भन्ने विरोधीहरुको मत थियो ।
गोरखाल्याण्ड होईन नेता मात्र जन्मेः सय वर्ष पुगेको अभियानले माग गरेको मुख्य कुरा गोरखाल्याण्ड नपाए पनि नेता भने अनेक जन्माएको छ । सनू् १९३६ मा दार्जालिङ नजिकको मिरिक मञ्चु चिया बगानमा जन्मेका सुवास घिसिङ नै अझै सम्मका प्रभावशाली गोरखाली नेता हुन् । हिसांत्मक आन्दोलनले एकाएक चर्चामा आएका उनले दागोपापमा सम्झौता गरे पछि भारत सरकारबाट ‘इन्दिरा शान्ति ’ पुरस्कार पाए । तर गोरामुमोका तत्कालिन उप महासचिव छत्रसिह सुब्बाले मोर्चाबाट विद्रोह गरेर अर्को संगठन खोले ।
घिसिङका समर्थकहरु पहिला दागोपाप नै गोरखाल्यण्डको प्रारुप हो भन्दथे भने छैठौं अनुसूचीलाई पनि उनीहरुले यसरी नै अथ्र्याई राखेका छन् । तर दागोपापमा सम्झौता गर्दा धारा २(४) मा गोरामुमो यो सम्बन्धि सवै आन्दोलन फिर्ता गर्न तयार छ भनेकाले घिसिङले लिखितरुपमै गोरखाल्याण्ड त्यागी सकेका हुन् भन्ने मत विरोधीहरुको छ । त्यसैले विहार र उत्तर प्रदेशमा नया“ राज्य जन्म हुदा बंगाल सरकारले गोरखाल्याण्ड बारे कुनै सुनुवाई नगरेको उनीहरुको मत छ ।
पश्चिमबंगालको सत्तासिन दल भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी) ले गोरखाल्यण्डका बारेमा गलत नीति अख्तियार गरेको भनेर लोकसभामा सो पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद रत्नबहादुर (आरबी) राई र राज्यसभाका सांसद तामाङ दावा लामाले सन् १९९६ मा पार्टी नीतिको विरुद्धमा नै गएर गोरखाल्यण्डमा अडान राखे । त्यती बेला क्रान्तिकारीहरुको माक्र्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी (क्रामाकपा) गठन भयो । आरबी राई सो पार्टीको महासचिव भए ।
त्यती बेला नै मदन तमाङको संयोजकत्वमा गोरखाल्याण्ड पिपल्स फ्रन्ट नामक संयुक्त मोर्चा पनि गठन भएको थियो । मोर्चामा गोरखालीका १३ बटा संघ संगठन र राजनैतिक दलहरु समावेस भएका थिए । तर पनि आन्दोलनले खासै गति लिएन । नया“ राज्य जन्म हुदा आफुहरुको वास्ता नभएको कुराले जुर्मुराएका गोरखालीहरु विस्तारै सेलाए । अहिले फेरि छैठौं अनुसूचीले विमल गुरुङ र उनको संगठन गोरखा जनमुक्ति मोर्चालाई गोरखाल्याण्ड आन्दोलनको सशक्त शक्तिका रुपमा चिनाएको छ ।
थरी थरी नेताले गोरखाल्याण्डको आवाजलाई बिउ“झ्याई राखेका छन् । तर यो सपना पुरा हुने हो वा होईन भन्ने दुविधा सर्वसाधरणलाई छ । इलाम भन्दा पर नपुगे पनि नेपालको राजनैतिक घटनाक्रममा चाख राख्ने दार्जालिङ गोलबजार नजिकका एक जना पसले गोविन्द क्षेत्री भन्छन् ‘ दाजुहरुको संविधान सभा र हाम्रो गोरखाल्याण्डको ताल एउटै भएको छ ।’
Posted by रमेशकुमार पौडेल at 8:27 PM
पखला लाग्दा मर्नु पर्ने मेडिकल सिटी
अस्पताल आउँदा यस्ता थिए बाबु ।
मेडिकल सिटीको रुपमा चर्चा हुने चितवनमा एकजना विपन्न परिवारका चेपाङ बालकले पखलाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। पखलाले सताएको तीन दिनपछि सदरमुकामा भरतपुर टेक्न पाएका बाबुले यहाँका राम्रा र सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा भर्ना हुन पनि सास्ती खेप्नु परेको थियो। ढिलो उपचार सुरु भएका कारण बाबु चेपाङले बिरामी भएको पाँच दिनपछि प्राण त्यागे।
सरकारी अस्पतालमा चेपाङ समुदायको निःशुल्क उपचार हुन्छ। निजी अस्पतालले पनि आफ्नो अस्पतालको १० प्रतिशत शैय्या गरिव वर्गलाई छुट्याउनु पर्ने प्रवधान छ। तर चन्दा उठाएर गाउँदेखि भरतपुरसम्म आएका बाबु चेपाङले उपचार पाउन तीनवटा अस्पतालमा धाउनु परेको थियो। निःशुल्क उपचार हुने भरतपुर अस्पतालले भर्ना त लियो तर आइसीयु खाली छैन भनेर अन्त्यै पठायो।
पुर्वी चितवनको पिप्ले गाविस वडा नं। ९ मा पर्ने पहाडी गाउँ धमिलेमाका चार वर्षीय बाबु चेपाङलाई असार २५ गते पखला लाग्न सुरु भएको थियो। उनकी आमा सुन्तलीले बाबुलाई सुरुमा भण्डरा स्वास्थ्यक केन्द्रमा उपचारका लागि ल्याएकी थिइन्। तर झन्पछि झन् झाडा बान्ताले च्याप्न थालेपछि असार २८ मा भरतपुर ल्याइएको थियो।
चितवन मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पतालमा उपचार गराइ रहेका बाबुको असार ३० गते राती नौ बजे निधन भएको हो। भरतपुर अस्पतालमा आइसीयु उपलब्ध नाएपछि उनकी आमा सुन्तली र साथमा आएकी भण्डरा डडुवा गाउँकी शर्मिला धरेलले बाबुलाई भरतपुर मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पताल लगे। त्यहाँ पनि आइसीयु छैन भनेपछि चितवन मेडिकल कलेज ल्याइएको थियो।
चितवन मेडिकल कलेजले निःशुल्क उपचार गर्ने बचन दिएको थियो। पखलाले सिकिस्त भएकाले अस्पतालले आइसीयुमा राखेर उपचार गर्दा गर्दै पनि उनलाई बचाउन नसकेको डा. दयाराम लम्सालले बताए। 'डायरियाले थलिएर बेहोस भइसकेको थियो। दुई दिन अगाडी ल्याएको भएत बच्ने सम्भावना रहन्थ्यो' डा.लम्सालले भने।
धमिले गाउँ राजमार्गबाट साढे तीन किलो मिटर उत्तरमा छ। राजमार्गसँगै जोडिएको डडुवामा आएपछि त्यहाँका गाउँलेले दुइ सहयोग जुटाए। एकै क्षणमा १५ सय रुपैयाँ जम्मा भयो। वन समितिले एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने भयो। बिरामी र सुन्तलीसँगै डडुवाकी शर्मिला धरेल भरतपुर आइन्। धमिलेमा बस्ने सवै चेपाङ हुन्। सवै विपन्न अवस्थाका छन्।
पुर्वी चितवनको पिप्ले गाविस वडा नं. ९ मा पर्ने पहाडी गाउँ धमिलेमाका चार वर्षीय बाबु चेपाङलाई असार २५ गते पखला लाग्न सुरु भएको थियो। उनकी आमा सुन्तलीले बाबुलाई सुरुमा भण्डरा स्वास्थ्यक केन्द्रमा उपचारका लागि ल्याएकी थिइन्। तर झन्पछि झन् झाडा बान्ताले च्याप्न थालेपछि असार २८ मा भरतपुर ल्याइएको थियो।
चितवन मेडिकल कलेजले निःशुल्क उपचार गर्ने बचन दिएको थियो। पखलाले सिकिस्त भएकाले अस्पतालले आइसीयुमा राखेर उपचार गर्दा गर्दै पनि उनलाई बचाउन नसकेको डा. दयाराम दहालले बताए। 'डायरियाले थलिएर बेहोस भइसकेको थियो। दुई दिन अगाडी ल्याएको भएत बच्ने सम्भावना रहन्थ्यो' डा.लम्सालले भने।
- See more at: http://nagariknews.com/society/nation/story/4387#sthash.qfn1Cp2z.dpuf
Posted by रमेशकुमार पौडेल at 8:23 PM
माया बाँड्न मान्छेले सिकौ यीबाट
जंगली हात्तीको छावा (दायाँ) र आफ्नो छावालाई सँगै दूध चुसाउँदै चितवनकली ।
‘धुर्बे’ को कथा सुनेकालाई हात्ती क्रुर मात्रै हुन्छ भन्ने लाग्दो हो । तर माया, ममता जनावरहरुमा पनि हुन्छ । त्यसमाथि हात्तीले गर्ने माया ममता मान्छेकोभन्दा कम हुँदैन । यो कुरा ख्याल होइन साच्चै हो । देख्नै मन लागेको छ भने भरतपुरबाट पुर्वी चितवन तर्फ लम्के हुन्छ ।
आफ्नो बथान र आमाबाट बिछोडिएको भर्खरको जंगली हात्तीको बच्चा (छावा)ले आमाको जस्तै माया र साथ पाएको छ । सौराहाको घरपालुवा ढोइ (पोथी हात्ती)ले उसलाई दूध चुसाउने गर्छे । आफ्नै र जंगली छावालाई सँगसँगै दूध चुसाएको दृश्यले सवैलाई दंग पार्छ ।
आफ्ना बच्चालाई पशुपंक्षिले पनि माया गर्छ । अर्काका बच्चालाई माया गर्न र स्याहार पु¥याउन मान्छेले मात्रै जानेको हुन्छ भन्ने बुझाई धेरैको छ । तर चितवन निकुञ्जको सौराहा हात्तीसारको जंगली छावा र घरेलु ढोइबीचको आत्मियताले यी सवै मान्यता गलत सावित गरेको छ ।
रौतहट बागमती किनारमा अलपत्र परेको जंगली छावालाई पर्सा वन्यजन्तु आरक्षका अधिकारीहरुले सौराहाको हात्तीसारमा ल्याएर बुझाएका हुन् । असार १७ गते दिउँसो सो छावा त्यहाँ आउँदा असार १४ गते राती बच्चा जन्माएको चितवनकलीको दूध चुस्ने अवसर पाएको छ ।
‘सुरु सुरुमा त नजिक जान यो छावा हिचकिचाउँथ्यो, डराउँथ्यो । अहिले त दूध चुसेको चुस्यै गरेर उल्टै माउलाई हैरान बनाउन थालेको छ’ हात्तीसारका प्रमुख विचित्रकुमार चौधरीले भने । चितवनकलीले जन्माएको छावा पोथी हो । जंगली छावा भाले हो । जंगली छावा अन्दाजी २० दिन पहिले जन्मेको हात्तीसारका कर्मचारीहरुको अनुमान छ ।
हात्तीको बच्चाले लगभग एक वर्षसम्म आमाको दूध मात्रै खान्छ । त्यसपछि बल्ल घाँस खान थाल्छ । ‘दूध चुस्न पाएन भने त बच्चा धेरै दिन बाँच्न सक्दैन’ केन्द्र प्रमुख चौधरीले भने । भर्खर बच्चा जन्माएकी चितवनकलीको दूध चुस्न पाएको सो छावाले अरु पोथी हात्तीको माया पनि उत्तिकै पाउँछ । ऐश्वर्यमाला छावा खेलाउन मरिहत्ते गर्छ ।
‘चितवनकलीसहित यहाँ छवटा अरु पोथी छन् । भर्खरकी सुत्केरी चितवनकलीलाई त बच्चा मन पर्ने नै भयो । अरु पोथी पनि उत्तिकै हुरुक्क हुन्छन् । ऐश्वर्यामाला त झन बच्चा खेलाउन सुत्केरीभन्दा पनि बढी मरिहत्तै गर्छे’ चौधरीले भने । दूध र माया पाएका कारण जंगली छावा अहिले हस्टपुस्ट हुँदै आएको छ । हात्तीसारमा ल्याउँदा हाडछाला मात्रै देखिन्थ्यो ।
पटक पटक दूध चुसेर हैरान गरेपछि बाँधेर राख्नु परेको छ । दुई छावाले दूध चुस्ने गरेपछि हात्तीलाई पौष्टिक पदार्थ थप्न हात्तीसारका कर्मचारीलाई भ्याइ नभ्याइ छ । हात्तीले जुम्ल्याहा बच्चा प्राय जन्माउँदैन । खोरसोरमा रहेको हात्ती प्रजनन् केन्द्रमा पाँच वर्षअघि एउटा हात्तीले जुम्ल्याहा जन्माएको थियो । एउटा जन्माए पनि चितवनकलीलाई दुई बच्चा हुर्काउने जिम्मेवारी थपिएको छ ।
‘आफ्नो समूह र आमाबाट बिछोडिनु दुर्भाग्य हो । तर यहाँ भर्खर बच्चा जन्माएको हात्ती रहेको हुँदा उ बाँच्न हुर्कन सहज हुने भयो’ चितवन राष्ट्रिय निमुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत कमलजंग कुँवरले भने । हात्ती समूहमा मिलेर बस्ने प्राणी हो । फरक समूहका ठुला भाले हात्ती एक अर्कामा घुलमिल हुन सक्दैनन् । तर पोथी हात्तीमा यस्तो समस्या हुँदैन ।
Posted by रमेशकुमार पौडेल at 5:53 PM